Ma Ahan Wax Caqliga Qaadan Karo In 200-Filim Flop Ah Sanadkaan 2016 Bollywood-ka Sameeyeen!!! - Hablaha Media Network
Ma Ahan Wax Caqliga Qaadan Karo In 200-Filim Flop Ah Sanadkaan 2016 Bollywood-ka Sameeyeen!!!
HMN:- Sanadkaan 2016 dhamaad ayuu ku dhow yahay sidaa darteed shabakada Boxoffice India waxay soo bandhigtay warbixin guud oo sharaxaad looga bixiyay sanadkaan inuu sanadkii ugu xumaa ee ebid Bollywood-ka soo martay.
Sanadkii hore waxay ahayd sanadkii ugu horeeyay ee Bollywood-ka in ka badan 200-filim sameeyaan cimri ahaanta fanka Hindiya oo 100-sano jiro.
Laakiin sanadkaan ayaaba kasii darneyd 218-filim ayay Bollywood-ka sameeyeen balse la yaab waxaa ah in 203-filim Flop noqdeen ama guul dareesteen.
Kaliya 15-filim oo kaliya ayaa ganacsi Boxoffice-ka ka sameeyeen kuwaas oo isugu jiraan kuwo qarashkii galay soo celiyeen iyo kuwo macaash laga helay.
Hadii dib loo laabto 25-sano ka hor sanadii 1991 Bollywood-ka waxay sameeyeen 144-filim waxaana markaas guuleesteen 28-filim.
Taasi oo ka dhigan in Bollywood-ka 25-sano ka hor 20% filimadooda guuleesteen halka sanadkaan 2016 kaliya 7% filimada shirkadaan guuleesteen!!
Hadii taariikhda dib loogu laabto 70-kii Bollywood-ka 50% guul ayay gaari jireen filimada ay sameeyeen balse xiligaan casriga ah oo tiyaataro badan la heesto iyo fasaxyada oo ahmiyad gaar ah la siiyo ganacsiga Bollywood-ka wuxuu noqday mid fadhiid ah!
Hormarka fanka Hindiya wuu dhamaaday waxaana lagu jiraa xiligii ugu xumaa taariikhda fanka Hindiya la yaabna ma ahan in shirkado badan sanadkaan albaabada la isugu dhuftay.
Bollywood-ka waxay la’yihiin dad sameeyo aflaan tayo wanaagsan, atoorayaal wax gadi karaan waayo sedexda Khans iyo kuwo soo raaco xiliyada fasaxa ayay ku aruureen marka sanadkana waa 12-bilood.
Sidaa darteed Bollywood-ka meeshii ugu xumeed ayay taagan yihiin dhaqaalo ahaan, ganacsi ahaan iyo sameynta fariin wanaagsan…..